Holm nke Church na Holm parish | Holmbygden.se
The ugbu ụka e wuru 1903-1904. Ọ bụ a miniature katidral, na mara mma nke ukwuu chancel windo ochie osisi ọkpụkpụ. A na-ekpo ọkụ na-egbuke egbuke ụka, mere site Gustaf Hermansson na neo-Gothic style. Ọ bụ otu ihe ahụ-atụpụta ụkpụrụ ụlọ ndị a haziri nke Gustav Adolfskyrkan na Sundsvall. Ndị mbụ akwukwo ụka, bụ a ochie ụka, wuru na 1400s na Holm Sea beach. Ọ bụ kwuru na Holm nwere a ọhụrụ ụka ọ bụla na narị afọ kemgbe ahụ. The ụka na adị tupu ugbu a, e wuru 1790 – 1792.
Gụọ ihe banyere Holms
Holm parish nke Härnösands pin na chọọchị ya i Anundgård (karta, ụzọ).
kọntaktị: 060-910 09, Assembly / Indalens pastorats website
kalenda: Ebe i nwere ike ịhụ ihe na-eme na chọọchị dị iche iche Holm, Indal, Lidén na Sättna.
kpọmkwem Links: Bible. SV. Church – uka, Dop, nkwenye, agbamakwụkwọ, olili ozu.
The chọọchị nwere ike na-akwado gị na ọtụtụ ụzọ.
Dị ka ihe atụ, ọ pụrụ ịbụ na-ekwurịta ihe na-oku na-aga nchụàjà (Tel. 112 – weekdays 21-06), ezinụlọ ndụmọdụ, nkwado maka ị na mwute ma ọ bụ ruo nwa oge ego enyemaka.
Maka ozi ọzọ na ihe chọọchị nwere ike ime ka i nwere ike ịchọta ebe a.
N'ihi Holm si Flower Fund nwere ike inye onyinye a onyinye maka ezi nzube ná Holm parish. Ka ihe atụ, ihe ịchọ mma nke chọọchị na-eli ozu ma ọ bụ na-agba ume bouquet onye agadi na-arịa ọrịa.
Ozi na akụkọ ihe mere eme banyere chọọchị na foto ndị si gara aga ewu.
Gụọ ihe banyere Church ebe a na svenskakyrkan.se.
Gụọ akụkọ ndị ahụ si Lidén Newspaper na 100 afọ ncheta 2004 (pdf).
Iji na-agụ PDF akwụkwọ gị mkpa Acrobat Reader (download ebe a).
Pictures of Holm si Church (Pịa na photos ka enlarge)
View of Holmsjön na chọọchị na center.
Holm chọọchị, Anundgård, ekwe ukwe.
Holm chọọchị, n'oge okpomọkụ 1993. foto: Åke Johansson.
Orgelläktaren i Holm. echebe: Barbro ogwu.
Anyị Lady nke Holm - Madonna ọkpụkpụ. Eleghị anya nko Gullesson.
Old ụka saịtị na ọdọ n'okpuru ugbu a na chọọchị, n'oge okpomọkụ 2009.
More foto ndị si Holm Church on Kyrkokartan.se.
Ọhụrụ ozi ọma Indalens parish (si Fabebook)
18/3: N'obere ụgbọala chọọchị na ọrụ dị Oxsjön Lidén pm 1... N'obere ụgbọala chọọchị na ọrụ dị Oxsjön Lidén pm 13.00 taa na-mwute ikwu na a kagburu ruru ọrịa
(Feed generated with FetchRSS)<... GỤKWUO
27/2: Fasteretreat Anyị bụ ndị ke Rịọtaara na n'oge spring, Anyị nwere ike iche na Ìhè ahụ na-na-ike ma ka na-na ọ bụ a oge fọdụrụ oyi. E nwere ike ịbụ a mgbe anyị na-amalite na-ike gwụrụ ... GỤKWUO
11/2: The asaa egwu mmehie.
Bụ asaa nwụrụ anwụ ... GỤKWUO
10/2: Gårdagens musikgudstjänst med Molte Ba... Ụnyaahụ musikgudstjänst na Molte Band na Indal Church, nyere anyị na e nwere oge dị mma na-amalite ka izu ụka. N'ụzọ dị mwute, ọ bụghị ọtụtụ mmadụ bịara na l ... GỤKWUO